Tsy azo ekena ny Feuille de routen’i Dr Simao hoy Lalatiana Ravololomanana ! (+vidéo) – MyDago.com aime Madagascar
Tsy azo ekena ny Feuille de routen’i Dr Simao hoy Lalatiana Ravololomanana ! (+vidéo)
« Tsy afaka maneho hevitra malalaka ny mpanohitra eto Madagasikara, voahitsakitsaka ny zon’olom-belona, tsy misy demokrasia eto » hoy Ramatoa Lalatiana Ravololomanana raha nitafa tamin’ny mpampahalala vaovao io atoandro io tetsy amin’ny La Rotonde Besarety. Tsy adinon’ny mpitarika ny Firaisankina ho fanohanana ny gadra politika ny nampatsiahy fa efa mahatratra 158 mahery ireo voafonja ara-politika ankehitriny, lasa atao fitaovana politika hamaliana faty sisa ny Fitsarana Malagasy hoy izy.Na inona na inona « endrika feuille de route » atolotra dia tsy hisy zava-banona izany indrindra raha ny fikatsaham-bahaolana amin’ny fivoahana amin’ny krizy raha tsy havoaka tsy misy hatak’andro ny gadra politika rehetra hoy Lalatiana Ravololomanana.
Mikasika izay « feuille de routen’ i Dr Simao izay indrindra dia tsy azo ekena mihitsy hoy izy, fanamafisan’orina ny fanjakan’olon-tokana io .Tsy mijery ny olana ifotony eto amin’ny firenena io ka tsy azo ekena hoy izy fa vao mainka hampitombo ny krizy efa misy.
Tsy adinony ihany koa ny nanentana ireo nanatrika ity famelabelaran-kevitra ity hamonjy ny fotoan-dehibe rahampitso, ataon’ny filoha Zafy Albert.
Comite de soutien Fetison et autres prisoniers politiques
Video-Lalatiana Ravololomanana, MALACAM 03 nov 10
Auteur Solo RazafyPublié le 2 février 2011 2 février 2011 Catégories Malagasy, Négos, Politique, Vidéos
Précédent Article précédent : Partage de pouvoir inéquitable, le « monde meilleur » tarde à venir !
Suivant Article suivant : Photos Magro Behoririka 02/02/2011